Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.4 Yaa inaad weydiiso
Baarka itimaalka iyo baarka aan jaaniska ma aha in kala duwan ee dhaqanka, labada kiis ee, waa dhan oo ku saabsan miisaanka.
Sanbal waa aasaaska loo tilmaamaan cilmi. Cilmi dhowaad marnaba weydiiso su'aalo si ay qof kasta oo dadka bartilmaameedka ay. Marka tan la eego, sahan ma ah kuwo gaar ah. cilmi Inta badan, in mid ka mid ah ama qaab kale, oo ku lug leh sampling. Mararka qaarkood sampling this waxaa si cad u sameeyey by cilmi; mararkii hore oo kale ay dhacdo si dadban. Tusaale ahaan, cilmi baare in waddaa tijaabo shaybaarka on ardayda undergraduate in iyada jaamacad ayaa sidoo kale soo qaatay tusaale ah. Sidaas darteed, sampling waa dhibaato soo baxa kitaabkan oo dhan. Dhab ahaantii, mid ka mid ah walaac ugu badan ee aan maqli ku saabsan ilaha da'da digital xogta waa ", ma ay joogin wakiil." Sida aynu arki doonaa qaybta this, walaac tani waa labada yar oo khatar ah iyo khiyaano badnayd fallaagadii badan oo ay ogaadaan. Dhab ahaantii, waxaan ku doodi doonaa in fikradda oo dhan "matali" waxba ma tarto, waayo fekerayo tijaabada ixtimaalka iyo non-itimaalka. Halkii, furaha waa in aad ka fikirto sida xogta la ururiyey iyo sida wax eexasho ee xog ururinta in la hagaajin karo marka qiyaasta.
Currently, hab xukuma teori inay wakiil yahay sampling itimaalka. Marka xogta la ururiyey la habka sampling jaaniska ah oo uu soo dhammaataan toogasho ah, cilmi ay awoodaan in ay miisaan xogta ay ku salaysan hab ah in ay la soo ururiyay in la sameeyo qiyaas aan eex lahayn ee ku saabsan dadka la bartilmaameedsanayo. Si kastaba ha ahaatee, sampling itimaalka kaamil ah asal ahaan marnaba ka dhacaya adduunka dhabta ah. Caadi ahaan jira laba dhibaatooyinka ugu waaweyn 1) kala duwanaanshaha u dhexeeya dadka bartilmaameedka iyo dadka jir iyo 2) aan jawaab (kuwani waa dhab dhibaatooyinka galaafatay ra'yiururin Suugaanta Dhayjast). Sidaas darteed, halkii ay ka fekereyso sampling ixtimaalka sida model macquul ah waxa dhab ahaan ka dhacaya adduunka, waxaa wanaagsan inay ka fekeraan sampling ixtimaalka sida waxtar leh, model ah aan la taaban karin, sida physicists jidka fekero kubad frictionless ilmadu ah Rowan dheer gabagabeyso.
Kale ayaa si sampling jaaniska waa sampling aan jaaniska. Farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya ixtimaalka iyo sampling aan jaaniska waa in la itimaalka sampling qof kasta oo dadka ku leeyahay ixtimaal ah oo loo yaqaan ee ka mid noqoshada. Waxaa jira, dhab ahaantii, noocyo badan oo sampling non-ixtimaalka, iyo kuwan hababka xog ururinta waxaa sii caadi ah in da'da digital. Laakiin, sampling aan jaaniska leeyahay sumcad daran dhexdooda saynisyahano bulshada iyo statisticians. Dhab ahaantii, sampling non-itimaalka waxaa la xidhiidha qaar ka mid ah fashilaad ugu riwaayado of cilmi baadhitaan, sida Buuqa Suugaanta Dhayjast (hore ka wada hadleen) iyo saadaasha aan sax ahayn oo ku saabsan doorashooyinka US madaxweyne ee 1948 ( "Dewey Guulaystay Truman") (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) .
Si kastaba ha ahaatee, waqtiga waa la qumman yahay in ay dib u sampling non-itimaalka laba sababood awgood. First, sida tijaabada ixtimaalka ayaa si isa soo taraysa u adag tahay in la sameeyo ku dhaqanka, xadka u dhaxeeya tijaabada ixtimaalka iyo baarka aan jaaniska waa mugdiga galinaya. Marka ay jiraan heerar sare oo aan jawaab (maadaama ay jiraan in sahan dhabta ah hadda), jaaniska dhabta ah ee inclusions waayo, jawaab bixiyayaasha la aqoon, oo sidaas, tijaabada ixtimaalka iyo baarka non-itimaalka aan sida kala duwan sida cilmi badan aaminsan yihiin. Dhab ahaantii, sida aan hoos ku arki doono, labada waji asal ahaan ku tiirsan yihiin habka ku qiimaysay oo kale; post-stratification. Second, waxaa jiray horumar badan ee dhinacyada soo ururinta iyo falanqaynta baarka aan jaaniska. hababka Kuwani waa kala duwan ku filan ka hababka in uu keeno dhibaatooyin ee la soo dhaafay in aan u malaynayaa in waxa macno u malayn of sida "non-itimaalka sampling 2.0." Waa in aynaan yeelan Carar ah aan buuxin si hababka aan jaaniska sababtoo ah qaladaad ka dhacay waqti dheer ka hor.
Next, si uu ugu caddeeyo dood this more la taaban karo, waxaan dib u eegi doonaa sampling ixtimaalka caadiga ah iyo miisaan (Qaybta 3.4.1). Fikradda muhiimka ah waa in sida aad u soo ururiyey xogta aad waa in ay saameyn sida aad qiyaasaha sameeyaan. Gaar ahaan, haddii qof kasta uusan haysan jaaniska la mid ah ka mid noqoshada, markaas waa in qof walba aan haysan miisaan la mid ah. In si kale loo dhigo, haddii aad sampling ma aha dimuqraadi ah, ka dibna ku qiimayso oo aad waa in aanay noqon dimuqraadi ah. Markaan dib u eegay miisaan, waxaan ku tilmaami doonaa laba waji oo si sampling aan jaaniska: mid diiradda saarayaa miisaan si ay ula dhibaatada xogta katimid ururiyay (Qaybta 3.4.2) macaamiloon, oo ka mid ah in isku dayo inuu meel awood badan ku sida xogta waa ururiyay (Qaybta 3.4.3). dood ee qoraalka ugu weyn ee lagu sharxay doonaa hoose hadallo iyo sawiro, akhristayaasha kuwaas oo jeclaan lahaa in daaweyn dheeraad ah xisaabta waa in sidoo kale fiiri lifaaqa farsamo.